Halyeeyga kubadda cagta Brazil ee Zico oo shaaca ka qaaday taladii dahabiga aheyd uu u jeediyay Neymar Jr – Gool FM
(Yurub) 06 Abril 2020. Halyeeyga kubadda cagta Brazil ee Zico ayaa shaaca ka qaaday inuu kula taliyay xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Neymar Jr inuu ku daydo xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Zico ayaa wuxuu dhinaca kale xusey in Neymar Jr ay qasab tahay inuu xirfadle noqdo, si uu u gaaro waxa ku haboon kartidiisa farsamo iyo xirfadiisa.
Si kastaba ha noqotee, wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadalo uu ka dhawaajiyay Halyeeyga kubadda cagta Brazil ee Zico, waxaana uu yiri:
“Waan jeclahay Neymar Jr, qaab ciyaareedkiisana waa mid aad u fiican, laakiin waa inuu noqdaa qof xirfad badan sida Ronaldo iyo Messi, kuwaasoo u nool kubadda cagta darteed”.
Halyeeyga kubadda cagta Brazil ee Zico ayaa sidoo kale tilmaamay waxa uu u arko inuu xaliyo Neymar Jr, isagoo tilmaamay baahida loo qabo inuu diirada saaro kubadda cagta isla markaana uu ka fogaado wax walba ee ka mashquulinaya.
“Waxaan la hadlay dhawaan waxaana ka codsaday inuu noqdo qof xirfad leh.”